नयाँ शक्तिको उद्घोष र यथार्थ | | Infomala
नयाँ शक्तिको उद्घोष र यथार्थ
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भए लगत्तै एनेकपा माओवादीबाट र सांसद पदबाट समेत राजीनामा दिएर अलग हुनुभएका डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ शक्ति नामक पार्टीको विधिवतरूपमा घोषणा गरेसँगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ । उहाँले यसअघि नयाँ शक्ति अभियान सञ्चालन गर्दै प्रायः माओवादीमा काम गरेका र अवकाश प्राप्त पूर्व कर्मचारी, कलाकार, उद्योग व्यवसायीलाई आफ्नो अभियानमा मोर्चाबन्दी बनाउँदै आउनुभएको थियो । नयाँ सोच र चिन्तनका आधारमा पार्टी गठन भएको भनिए पनि पार्टी घोषणा गर्दाको तामझाम र प्रचार प्रसार भने पुरानै शैली र ढाँचाभन्दा भिन्न थिएन तर आइतबार काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा भेला भएका मानिसको उपस्थिति आम समुदायको अपेक्षाभन्दा बढी नै भए पनि आयोजकको लक्ष्य अनुरूप एक लाख मानिस भने थिएन । पुरानै शैलीमा बसमा ‘अनलोड’ गरी मानिस भेला गरेर गरिएको तडक भडक हेर्दा र प्रायः केही अखबार बाहेक सबै अखबारमा ज्याकेट विज्ञापनसहित भट्टराईका तस्बिर र पार्टीको प्रतिबद्धता भरिएका देख्दा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेझैँ देखिन्थ्यो । जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि अखबारको पुरै पेज ढाकिएको डा. भट्टराईको तस्बिर देख्दा लाग्यो– यो पार्टीको प्रमुख लक्ष्य व्यक्ति पूजा नै रहेछ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा नयाँ शक्तिको स्वरूप, नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी आदि लेखिएको देखियो । यस्ता टिप्पणीको पनि कुनै न कुनै कुनाबाट समीक्षा र विश्लेषण त भइरहेकै होला । योसँगै नयाँ पार्टी खोल्नु पर्नाका कारण र उद्देश्य प्रस्ट्याइएको देखिँदैन । दुई दिनसम्म चल्ने बन्द सत्रले यस विषयमा स्पष्ट गर्ने नै होला । हुन त अबको निकास आर्थिक विकास, समृद्धि सम्भव छ हाम्रै पालामा भन्ने मूल नारासहित सुशासन र सदाचार, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, समतामूलक समृद्धि, समानुपातिक, समावेशी सहभागितामूलक लोकतन्त्र र समुन्नत समाजवाद हाम्रो प्रतिबद्धता भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै यो पार्टी दुई वर्षभित्रमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आउने दाबी पनि गरिएको छ ।
पार्टीबाट अलग भएपछि भट्टराई पार्टी सञ्चालन गर्नसक्ने क्षमता नभएका व्यक्तिका रूपमा समेत चित्रण गरिएको थियो । अन्तरमुखी स्वभावका भट्टराई पार्टीबाट बाहिरिँदाको अवस्था यस्तै पनि थियो । एमाओवादीमा प्रचण्डपछिको दोस्रो तहमा रहनुभएका उहाँले पार्टीबाट अलग हुँदा त्यस्तै स्वभाव प्ुष्टि गर्नुभयो, एक्लै पार्टीबाट अलग रहेको घोषणा गरेर । उहाँले आफ्ना टोलीका कतिपय विश्वास पात्र भनिएकालाई समेत सँगै लैजान सक्नुभएन वा यो रणनीति थियो त्यो स्पष्ट हँुदै जानेछ । ‘मन्त्री र सांसद पद जोगाउन’ भट्टराई नजिकका कतिपय नेता अहिले पनि माउ पार्टीमै रहेको भए पनि तिनीहरू नयाँ शक्ति अभियानमा आउने विश्वास एकथरिमा रहेको पाइन्छ । यस हिसाबले हेर्दा नयाँ शक्तिमा पूर्व माओवादीहरूकै बाहुल्यता रहने देखिन्छ । हालसम्म यस शक्तिमा जोडिन आएका अन्य पार्टी, समूह र व्यक्तिको अवस्थाले पनि यही तर्कलाई बल पु¥याउँछ । कुनै पनि पार्टीका प्रभावशाली व्यक्तिको उपस्थिति नरहेकाले पार्टी भट्टराईको सोच र विचारबाट अघि बढ्ने कुरामा भने कुनै शङ्का छैन । अब भट्टराईमा देशलाई समृद्ध बनाउने सोच र योजना के के छन् र तिनको कार्यान्वयन कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ । पार्टीको पहिलो व्यक्ति हुने रहरमा यो गठन भएको हो भने देशमा दर्ता भएका १८० वटाभन्दा यसको चरित्र पनि भिन्न हुने छैन । त्यसैले नेपालका नेताले राजनीति गर्न जानेका छन्, विकास गर्न जानेका छैनन् भनेर भन्ने गरिएको होला । २००७ सालदेखि हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दा देशको विकासप्रतिको दूरगामी सोच बीपी कोइराला बाहेक कुनै पनि नेतामा रहेको सायदै पाइएला । अहिलेसम्मको राजनीतिले योजना र खाका विनाका विकासका कुरा गरेर देशलाई अलमल्याउने काम गरिरहेको छ । यसैकारण साधन स्रोत भएर पनि हामी कमजोर राष्ट्रका रूपमा दरिँदै छौँ । नयाँ शक्ति पार्टी पनि राजनीतिक उद्देश्यले मात्र प्रेरित भएर खडा भएको हो भने यसले पनि अन्य विशेष चरित्र देखाउन सक्ने छैन ।
पार्टी पार्टीबीच र आन्तरिक द्वन्द्वमा समय बिताउने राजनीतिक संस्कार विकसित हुँदै जान थालेको सन्दर्भमा डा. भट्टराई मात्र त्यसबाट अछूत रहेर आफ्नो मिसन र भिजनलाई लागू गर्न सफल हुनुहोला भन्ने अवस्था र आधार देखिँदैन । भट्टराईले विगतमा देशलाई रूपान्तरित गराउने योजना तय गर्ने जिम्मेवारी नपाएको होइन । देशको अर्थ र प्रधानमन्त्रीसमेत भएर उहाँले तय गरेका नीति र कार्यक्रम कस्ता थिए वा तिनको कार्यान्वयन कुनरूपमा अघि बढ्न सक्यो भनेर समीक्षा पनि त हुनुपर्ला । त्योसँगै नयाँ पार्टी गठन गरेपछि जनयुद्ध कालमा उहाँको नेतृत्व कालमा हत्या हिंसाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि
पर्दैन ? सस्तो लोकप्रियताको कुराले मात्र जनताको जीवनमा परिवर्तन आउन सक्दैन । साँच्चै पार्टीको अङ्कुशमा परेर काम गर्न नसकेर आफ्ना विकासप्रतिका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्नैका लागि नयाँ पार्टी गठन गरिएको हो भने पक्कै पनि भट्टराईको भिजनअनुसारको विकास र परिवर्तन सम्भव होला, होइन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पेलाइमा परेर वा पार्टीको पहिलो व्यक्ति हुने रहरमा नै खडा भएको हो भने पछिल्लो अभिष्ट चाहिँ पक्कै पनि पूरा हुनेछ । मुलुक धेरै किसिमका अभावमा रहेका बेला यहाँ राजनीति गर्न कठिन छैन । जनतालाई भाषण र आश्वासनमा बचाइ राख्न सक्ने दल र नेताको नेपालमा कमी छैन ।
यतिबेला डा. भट्टराईको यो अभियानप्रति सकारात्मक सोच र दृष्टिकोण पनि बनेको छ । मध्यम वर्गीय परिवारका व्यक्ति भएकाले उहाँले देश दुनियाँ बुझ्नुभएको छ, देशको आवश्यकता के हो र यसलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने योजना उहाँसँग छ तर यहाँनेर द्विविधा राख्न नपर्ने ठाउँ के छ भने उहाँसँग मुलुकलाई समृद्धि गराउने योजना, खाका र ऊर्जाशक्ति होला तर उहाँले नेतृत्व गरेको टिममा त्यो शक्ति र तागत छ कि छैन वा हुन्छ कि हुँदैन ? प्रधानमन्त्री भएका बेला आफूले मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढेर अघिपछि प्राडो र पजेरोको लस्कर लगाएजस्तै एक भट्टराईले मात्र आफूलाई परिवर्तन गरेर हुन्छ
के ? नेतृत्वले त सबैलाई आफू अनुकूल रूपान्तरित गराउन सक्नुपर्छ । आफ्नो समूहलाई नै परिवर्तन गराउन नसक्नेले देशलाई कसरी परिवर्तन गराउन सक्छ ? अहिलेको टिमबाट त्यो सम्भव छ कि छैन ? कतिपय कर्मचारी पूर्व प्रशासक र अवकाश लिने अवस्थामा पुगेका मानिस पनि छन्, तिनले पार्टीलाई नयाँ सोच र विचार दिन सक्छन् भन्ने प्रश्न पनि छ ।
यो पार्टीलाई दक्षिणी छिमेकीको आड र इशारामा खडा भएको चर्चा पनि चलाइएको छ । राजनीतिमा डा. भट्टराईलाई त्यो वृत्तमा राखेर हेर्ने गरेको पनि पाइन्छ । नेपालको राजनीतिमा दक्षिणको स्नेह नलिई राजनीति गर्ने दल र नेता कमै भेटिएलान् तर चिलले कुखुरा लग्यो भनेर हल्ला गर्दै कुखुरा टिपेर हिँड्ने स्याल प्रवृत्तिको प्रभाव नेपालको राजनीतिमा बढ्ता नै छ । दिनभरि गाली गर्ने र साँझ परेपछि दूतावास छिर्ने राजनीतिक संस्कार नै बनिसकेको अवस्थामा यस्ता आरोपको त कुनै अर्थ रहँदैन । फेरि अहिलेको यत्रो विश्वव्यापीकरणको अवस्थामा कुन दल र व्यक्तिको कोसँग नाता सम्बन्ध र बसउठ छ भनेर हेर्नुभन्दा पनि त्यो दल र व्यक्तिले मुलुकको हितमा काम गरेको छ कि छैन हेरिनुपर्छ तर नयाँ शक्ति पार्टी कुनै शक्तिको इशारामा मात्र खडा भएको हो भने यसको अन्तिम अभिष्ट सत्ता राजनीति बाहेक केही हुने छैन । नेपालमा धेरै वामपन्थी पार्टीहरू सत्ता सङ्घर्षका लागि फुटेका छन्, विभाजित बनेका छन् । शान्ति प्रक्रियापछि यत्रो जनयुद्ध गरेको भनेको पार्टी नेकपा माओवादी पाँच समूहमा विभाजित भएबाट नै स्पष्ट हुन्छ । यतिबेला ती विभाजित केही दल जोडिएका पनि छन् । डा. भट्टराई पनि त्यही शक्तिबाट अलगिएका हुनाले यो भोलि कुनै पार्टीसँग एकीकरण गर्न नपुग्ला भन्न सकिन्न । नेपालको राजनीतिमा आफूलाई शक्तिमा राख्न दलबीच यस किसिमका गतिविधि भइरहेका छन् र पछि पनि हुनसक्छन् । यो अन्यथा मान्ने विषय पनि हुने छैन । भट्टराईको पार्टीको प्रमुख ध्येय पनि सत्ता र शक्तिको मात्र हो भने यो पनि पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सी सिवाय केही हुने छैन ।
आइफेल टावर अमेरिकी झण्डाको रङ्गले रङ्ग्याइने ‘नेपाल सुरक्षित छ’ वृत्तचित्र निर्माण
Archives Select Month February 2018 January 2018 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013